हङकङ नेपाली महासंघमा महाधिवेशन चटारो- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक २८, २०७८ प्रदीप मेन्याङ्बो
सुनसरी — हङकङ सरकारले दिएको हङकङ आईडी (परिचयपत्र) वाहक नेपालीहरुको छाता संगठन हङकङ नेपाली महासंघको ११ औं महाधिवेशन २८ नोभेम्बरमा गर्ने तयारी सुरु भएको छ । याउमातेई कम्युनिटी सेन्टरमा हुने महाधिवेशनले तीनवर्षे कार्यकालका लागि पदाधिकारी चयन (निर्वाचित) गर्नेछ ।
आइतबार महाधिवेशनबारे जानकारी दिँदै महासंघका अध्यक्ष टंक रानाले भने, ‘हङकङमा नयाँ सुरुक्षा कानुन लागू गरेयता महासंघको यो पहिलो महाधिवेशन हो । महासंघले यहाँको सरकारसँग समन्वय गरेर हङकङका अल्पसंख्यक नेपाली समुदायको विभिन्न समस्या समाधान गर्ने गरेको छ । हङकङ सरकारले समेत महासंघलाई ‘रेकोग्नाइज’ गरेकाले महासंघलाई थप जवाफदेही बनाउन महाधिवेशनको आयोजना गर्न लागिएको हो ।’
ब्रिटिसले चीनलाई सन् १९९७ मा हस्तान्तरण गरेपछि हङकङमा जन्मको आधारमा सोही वर्षदेखि नेपालीहरु हङकङ आइडीमा जाने, काम गर्ने, व्यापार/व्यवसाय गर्ने इतिहास सुरु भएको हो । महासंघमा जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय र लिङ्गीय आधारमा स्थापना भएका नेपालीहरुको संस्थाका दुई जनाका दरले सहभागी भएका प्रतिनिधिहरुले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने प्रावधान छ । बद्लिँदो परिस्थिति र नयाँ सुरक्षा कानुन लागू भएपछि त्यसैलाई पच्छ्याउँदै महासंघले हङकङ सरकारसँग विभिन्न माग राखेर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको अध्यक्ष रानाले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समयमा कहिले सरकारी प्रतिनिधिहरु, मन्त्री र सांसदहरुलाई महासंघको कार्यालयमा बोलाएर कहिले चिफ सेक्रेटरीकै कार्यालयमा पुगेर बुँदागत रुपमा हङकङमा बस्ने नेपालीको मृत्यु भएका बेला जमिनमा राख्नका लागि सिमेट्री (समाधिस्थल), नेपालीहरुका लागि सामुदायिक क्लब भवन, चिनियाँ भाषामा दख्खल नभए पनि सरकारीस्तरबाट रोजगारी दिलाउनुपर्ने लगायत विषयमा औपचारिक रुपमा माग राख्दै आएको छ । हङकङमा हाल करिब ३० हजार नेपालीहरु त्यहीको परिचयपत्र लिएर बसेका छन् ।
पूर्व अध्यक्षहरु प्रदीप थापा र रीता गुरुङका अनुसार नेपालीहरुको जमात बढ्दै गएपछि उनीहरुको सामाजिक हितका लागि भनेर सन् १९९८ मा हङकङमा मनिकिरात बान्तवाको अध्यक्षतामा पहिलोपटक हङकङ नेपाली महासंघ दर्ता गरिएको थियो । महासंघका सल्लाहकारसमेत रहेका थापाले भने, ‘यो महासंघले हङकङ सरकारसँग एकापसमा सोझै समन्वय गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरु समेत संचालन गर्दै आएको छ । महासंघलाई थप सक्रिय र बलियो बनाउन सरकारले पनि सहयोग गर्दै आएको छ ।’
महासंघ लोक कल्याणकारी संस्था भएकाले हङकङ सरकारले पछिल्लो समयमा प्रतिमहिना एक हङकङ डलरमात्र तिर्ने सर्तमा महासंघको गतिविधि संचालन गर्न कउलुन जिल्लाको मंकोकमा कार्यालय भवन उपलब्ध गराएको पनि अध्यक्ष रानाले बताए । उनका अनुसार महासंघमार्फत नै सरकारले खेलकुद सामाग्री दिने, चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण दिलाउने, वृद्धवृद्धालाई नि:शुल्क यात्रा र घुमाउने, इमिग्रेसनमा अनुवादक उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
यसपटक महासंघलाई हङकङको बदलिँदो परिवेशअनुसार पदाधिकारी चयन गर्न चुनौती थपिएको छ । वर्तमान अध्यक्ष रानाले दोहोर्‍याउने वा निवर्तमान अध्यक्ष रीता गुरुङ वा त्यहीको चिनियाँ समाज र हङकङ सरकार बुझेको नेतृत्व आउने सम्भावना बढेको बताइएको छ । राना हङकङमा चिनियाँ समाजमा पनि स्थापित व्यावसायी हुन् भने रीता गुरुङ समाजसेवीको रुपमा हङकङ सरकारबाट सम्मानित र हाल अल्पसंख्यक नेपाली समुदायबीच संचालित विभिन्न परियोजनाका संयोजक हुन् । दुवै स्थानीय चिनियाँ भाषा बोल्न पोख्त रहेका छन् ।
हङकङ सरकारले नेपालीहरुको हकमा महासंघलाई औपचारिक रूपमा चिन्ने भएकाले त्यसको पदाधिकारी बन्न अरु पनि अध्यक्ष पदका आकांक्षीहरु रहेको बताइएको छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७८ १९:४४
कार्तिक २८, २०७८ प्रकाश धौलाकोटी
काठमाडौँ — कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेता प्रकाशमान सिंहबीच भनाभन परेको छ । बैठकमा नेता सिंहले बोलिरहेका बेला देउवाले बीच-बीचमै जवाफ फर्काएका थिए । बैठकमै देउवा–सिंहबीच सवाल चलेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।
ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार बैठकमा बोल्दै नेता सिंहले सत्ता गठबन्धन सरकार चलाउनका लागिमात्रै हो कि चुनावसम्मै हो ? चुनावमा तालमेल हुन्छ भन्ने आएको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । सिंह बोल्दा–बोल्दै देउवाले जवाफ फर्काएका थिए, ‘यहाँ सुन्नुस्, सरकार गठबन्धनले नै चलाउने हो । तर, चुनाव मिलेर लड्ने कि नलड्ने भन्ने कुरै भएको छैन । केही निर्णय नै भएको छैन । यसै कराउनुहुन्छ ।’
चुनावमा कसैसँग गठबन्धन गर्ने सहमति भएको छैन : प्रधानमन्त्री देउवा
नेता सिंहले गठबन्धन सरकारका गतिविधिको लेखाजोखा चुनावमा हुने बताएका थिए । उनले उच्चस्तरीय संयन्त्र किन बनाएको भन्दै प्रश्न गरे । ‘तपाईँले गठबन्धनको नेतृत्व गर्नुभएकै छ । अर्को संयन्त्र किन चाहिएको हो ? कम्युनिस्टको दबाबमा परेर संयन्त्र बनाएको भन्ने छ ?’ सिंहले प्रश्न गरेका थिए । देउवाले सिंहको प्रश्नमा तुरुन्तै जवाफ फर्काए । ‘स्पष्टीकरण चाहनुभएको हो ? हो भने सुन्नुस् । यो समन्वय गर्नलाई बनाइएको हो । लामो समयका लागि होइन, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्मका लागिमात्रै हो ।’
देउवालाई पौडेलको प्रश्न- ‘सुतुरमुर्ग शैलीमा मुन्टो लुकाएर कति दिन हिँड्ने ?’
नेता सिंह त्यत्तिमा पनि रोकिएनन् । उनले क्रियाशील सदस्यतामा भएको मनपरीबारे प्रश्न उठाए । ‘क्रियाशीलमा मनपरी भएको छ । सभापतिले समाधान गर्छु भन्नुहुन्छ, तर समाधान भएको छैन,’ सिंहले भने । ‘भइरहेको छ त,’ तुरुन्तै देउवाले बोलेका थिए ।
नेता सिंहले महाधिवेशनका बेला कार्यकर्ताले न्याय खोज्दा पनि नेतृत्वले नसुन्नु दुःखद् हुने बताए ।
देउवाले रोक्दारोक्दै थापाले भने- 'प्रधानन्यायाधीश विवादबारे पार्टीले नबोले व्यवस्थाले नै मूल्य चुकाउँछ'
कांग्रेस केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन तयारीका लागि समिति गठन